Warmly Welcome: ရင်ထဲက လွန်ဆွဲပွဲ (သို့) နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်
အမယ်..သူကလိုက်ဦးမလားတဲ့၊ သူတောင် ဘယ်သူ့ဆီသွား ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပြီးတော့၊အကြံတော့ ပေးချင်သား၊ မှားသွားမှာ စိုးရိမ်လို့ ဒီတိုင်းပြန်လာတာကို လိုက်ခေါ်တယ်:)
မိဘစကားနားထောင်ဖို့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးရဲ့ စိတ်ကိုလည်း မေးကြည့်သင့်မယ်ထင်တယ်။
လေလှိုင်းပေါ်ကအချစ်အတွက် နီးစပ်အောင်ကြိုးစားဖို့ အခွင့်ရှိမလား စဉ်းစားသင့်တယ်။
သူငယ်ချင်းမလေးက သဘောတူတယ်၊ နီးစပ်ဖို့လည်း ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင် လေလှိုင်းကိုရွေး။
ကျန်တဲ့ စဉ်းစားစရာတွေတော့ အရမ်းတွေးမပေးရဲဘူး။ တစ်ဖက်ကိုအားပေးရင် တစ်ဖက်နစ်နာမှာဆိုးလို့ပါ။
ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေလား ကိုဝင်းဇော်ရေ။
နာလည်း မလုပ်တတ်ဘူး ... အဟား ..
နာကတော့ နာကတော့ .. ..
မိဘစကား နားထောင်တယ်ဆိုတာ လေးစားလောက်စရာ ကိစ္စမို့ အားကျမိပါတယ် ဒါပေမယ့် ခုခေတ် ကော ဒါမျိုး ရှိလို့လား အစ်ကိုး) ရုပ်ရှင်ထဲကလိုဆိုရင်တော့ မင်းသားက ဆုံးဖြတ်ရခက်မှာပဲ ။ ကိုယ့်လိုပဲ သူမှာလည်း
“...Vs Me” ရှိ ကောင်းရှိနေပါလိမ့်မယ် တိုင်ပင်ကြည့်ပေါ့ ဖိုးရှမ်းလေး ရယ် ။ အကြံပေးကြပါအုံးဆိုပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ကိစ္စလို့ ကျနော်တော့ထင်တယ် အဖြေညှိတဲ့ သဘောလားလို့ အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ သူလည်းချစ် ကိုယ်လည်းချစ်မယ် 21 လေးကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါလား ပျော်စရာကောင်းပြီး အချစ်နဲ့ တည်ဆောက်မယ့် အိမ်ကလေးကသာ အခိုင်မြဲ ဆုံးပါ ။ လွန်ဆွဲံပွဲလေးမှာ အနိုင်ရပါစေ ။လေလှိုင်းမှာလည်း အချစ်စစ်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ် သေချာတာ အပြင်မှာ ၂ ဦးစလုံးနဲ့ အရင်တွေ့ကြည့်ပါလား ...အဲ့ သိတော့ဘူး ခေါင်းစားတယ် :P
သိမ်မွေ့ပြီး နက်နဲတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်။
မိဘကျေးဇူးကို သိတတ်တဲ့ ကလေးဖြစ်တယ်။
မိဘကျေးဇူးကို မဖြစ်မနေ ဆပ်သင့်တယ် ဆိုရင်တော့ မိဘစကားကို နားထောင်ရမှာပေါ့နော်
မိဘစကားနားထောင်တာကိုတော့ လေးစားပါတယ်အကိုရေ။ မိဘကျေးဇူးသိတတ်တာလည်းပဲကောင်းပါတယ်အကို အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ။
နှစ်ဖက်လုံး မနစ်နာရအောင်... :P
ဒီလိုပြောပြန်ရင်လည်း အကိုက ခံစားနေရတော့မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကျိုးအကြာင်းကို စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်တာက ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ တစ်ဘ၀လုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စလေ... အဓိက ကိုယ့်ကို ရေရှည်ချစ်နိုင်မယ့်သူ၊ ကိုယ့်ကို ထာဝရ နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ ဆိုတာပဲဗျ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကို ပျော်ရွှင်နိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်... ညီမရဲ့စကားတွေ မှားခဲ့သည်ရှိ တောင်းပန်ပါ၏...း))
နောက်ဆုံးတော့ ဒီဘူတာကို ဆိုက်လာတာပဲ မဟုတ်လား။ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါ လုပ်လို့ ရတဲ့ ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ အိမ်ထောင်ရေးကို နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်မှာလား ဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်မှာလား ဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ချင့်ချိန် လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ နစ်နာရမှာ အမှန်ပါ။ အပေါ်က မေဒီဇာ ပြောသလို ကိုဝင်းဇော်ပဲ လူပျိုသိုးပဲ လုပ်ပါတော့ .. အဟီး
သင်္ချာတစ်ပုဒ်လို တွက်ရင်တော့ အဖြေက အကြွင်း (၁)ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် နှလုံးနာနေစေတဲ့ အကြွင်း ပါပဲ။
စာရေးထားတာ ကောင်းတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်။
သံယောဇဉ် နဲ့ အချစ် ဆိုတဲ့ ၂ ထဲက ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေးသင့်သလဲ..........
သေချာတာတစ်ခုကတော့ တစ်ယောက်သောသူက ကျန်ရစ်သူပဲလေ။
ကိုယ့်နဲ့ဖူးစာမှန်ရာက ကိုယ့်ဆီကိုလာမှာပါ ....... :P
အချစ်ကြောင့် ငယ်သံယောဇဉ်ကို ထားခဲ့တဲ့သူရှိသလို.... ငယ်သံယောဇဉ်ကြောင့် အချစ်ကို ကြောခိုင်းသွားခဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ......
လောကက ချစ်တိုင်းလည်းမညား....... ညားတိုင်းလည်းမချစ် ...
ညားတိုင်းသာ...... ချစ်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ လောကကြီးက ပျော်ရွင်စရာအတိပေ့ါ
မပေးချင်ပဲ ပေးရပြန်ပြီ ဒီလို အကြံတွေ ဟီးးးးးးး...
အကိုရေ မိဘစကားနားထောင်တာ ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ရပ်တခုပါ။ ဒါပေမဲ့ အကိုက မိဘပေးစားမဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကော သေချာ စဉ်းစားတိုင်ပင်ပြီး ပြီလား အကိုတို့က အဆက်အသွယ်တော့ ရှိတယ်လေ ဒါပေမဲ့ အပြင်မှ တွေ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့ သံယောဇဉ်ကို ဘယ်လောက်ထိ ရှိမလဲ သေချာစဉ်းစားကြည့်ဖူးလား မသိ။ 21 VS Me လေးကကော အားလုံး အိုကေနိုင်မလား အကောင်းဆုံးကတော့ အကို လူပျိုကြီး လုပ်လိုက်လေ ဒါဆို နှစ်ယောက်လုံးအေးဆေး ဟီးးးးးးးးးးးး
ကိုမောင်မျိုး ထင်မိသလိုပဲ ဒီကိစ္စကို အကို့ရဲ့စိတ်မှာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြစ်မယ် ထင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလှည့်စားပဲ အနာဂတ် အိမ်ထောင်ရေးမှာ သာယာပျော်ရွှင်နိုင်မယ်(ယေဘုယျ အားဖြင့်ပေါ့။) ယုံကြည်ထားတဲ့ သူကို ရွေးချယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး ချန်ထား ကျန်ရစ်ခဲ့မယ့် သူလဲ နားလည် လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့တော့ တာဝန် ရှိတယ် ထင်မိတယ်။ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စပဲ။ မှန်ကန်ပျော်ရွှင်စွာ ရွေးချယ်မှု ပြုနိုင်ပါစေ။
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလေး စောင့်ပါ။ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စိတ်ဟာ ဘယ်သူ့ဘက်အားသာနေတယ်ဆိုတာ စာဖတ်တဲ့သူတိုင်း သိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရာခပ်သိမ်းအဆင်ပြေစေချင်ရင် အချိန်လေးတစ်ခု စောင့်လိုက်ပါ (အဟဲ.. သိပ်အရေးမကြီးသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ).
အဟဲ ဖိုးချမ်းလေး ရေ လွတ်တဲ့ ငါးက ကြီးတတ်တယ်တဲ့ဗျာ.
ဒီတော့ အရင် ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ငါးရံ့နှစ်ကောင် လုံးက ရောက်နေပြီလား ဆိုတာ သေချာစိစစ် ပါအုံး..
သေချာပြီဆိုမှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အကောင် ကိုယ်ချက်စား အဲလေ ရှုပ်ကုန်ပြီ..
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရွေးပြောတာ ဟိ ဟိ..
ကျွန်တော် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ချစ်နေတဲ့ ဟာပဲ ရွေးမယ်
ငယ်ငယ်တည်းက ဆိုတဲ့ သံယောဇဉ် ကြိုးလေးတစ်ချောင်းကိုမြင်နေရတယ်..
ဖိုးရှမ်းရင်ထဲမှာ နေရာ အပြည့်ယူထားတဲ့သူကတော့
ရှိတဲ့ သံယောဇဉ် က စိတ်ကူးထဲက ပုံရိပ်ပါ..
ငယ်သူငယ်ချင်း ကိုပဲ လက်ခံလိုက်ပါ...
မချစ်ခဲ့ကျတော့ရင်တောင် သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ လက်ကျန်သံယောဇဉ်လေးတော့ကျန်မှာပါ..
ညီမ အမြင်ကတော့ ကိုလင်းထက်ပြောသလို နှစ်ယောက်စလုံးက ကိုယ့်ကိုလက်ခံမှာ သေချာလား ဆန်းစစ်ပါဦး။ နှစ်ယောက်စလုံးက ကိုယ့်ကိုလက်ခံတယ် ရွေးချယ်မှုကို ကိုယ်ကလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့် အတွက် ဘယ်တစ်ယောက်က အရေးအကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အမေက ကတိတောင်းခဲ့တာမှန် ပေမယ့် ဘယ်အမေမှကိုယ့်သားသမီးရင်ကွဲခံတာကို မြင်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမေသာသက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့ရင် ကိုဖိုးရှမ်းအချစ်ကို အသိအမှတ်ပြုမှာပါ။ ညီမအမြင် အမေက ဒီကတိတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာ စီးပွားရေးကိုဇောက်ချ လုပ်ပြီး မပွေမရှုပ်ပဲ တည်ငြိမ်စေချင်လို့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့မှာခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ ညီမ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ မင်းသမီးက၂ယောက်ကို ယှဉ်ရွေးရတော့မယ့်အခါ သူ့ကိုယ်သူမေးခွန်း ၂ခုမေးတယ်။
Should I marry someone with whom I can live?
Or should I marry someone without whom I cannot live?
ကိုယ်အတူနေနိုင်နဲ့တူ ဒါမှမဟုတ် သူမရှိရင်ကိုယ်အသက်မရှင်နိုင်တဲ့သူ။ ကွန်မန့်ကရှည်သွားပြီ။ ဆရာကြီးလုပ်သလိုဖြစ်ရင် ဆောရီးနော်။ အဆင်ပြေပါစေ။
၀င်းဇော်ရေ အဟမ်း အဟမ်း ပြန်တော့မယ်နော်။
အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့.... Internet မသုံးပါနဲ့လို့... ဟီး
ရှမ်းလေးနေရာမှာ ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားကြည့်တယ် ... ငယ်သူငယ်ချင်းက ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာဟုတ်ပါရဲ့ .. သူမှာရော ရှမ်းလေးလို သံယောဇဉ်တစ်ခုခုများရှိနိုင်မလား ... ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ် ... သေချာဆွေးနွေးကြည့်ပေါ့ ... လေလှိုင်းပေါ်ကသူလေးကျ တော့ရော ...သေချာယုံကြည်ရပါ့မလား(နစ်နာလိုစိတ်မရှိပါဘူးနော်) ဘယ်လောက်ထိ ဆွေးနွေးပြီးပြီလဲ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ စိတ်ပါနေသလား ... သူ့ဘက်ကစိတ်ပါတာကရော ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးထားတဲ့ ကိုယ့်အထင်လား သေချာဆန်းစစ်စေချင်ပါတယ် ... အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးလို့ ကိုယ်ရွေးချင်တဲ့သူကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်တော့ နောက်လှည့်မကြည့်တမ်းပေါ့ ... ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု့ရဲ့ရလဒ်ကို ကိုယ်ပဲခံရမှာလေ ... ပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့ ကြိုက်တာသာရွေးလိုက်ပေတော့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ် ...
အဟမ်း အဟမ်း ပြန်ပြီနော် ( သိနေတယ် ) အဟေးးး
အကို့ ရွေးချယ်မှုက အရေးကြီးပါတယ်။
အမြန် ကေကေ ပါစေ။
ဒါမျိုးကလဲ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမဲ့ အရာဆိုတော့
ပြောရရင်တော့ အစ်ကိုရေ။ ကျနော်က ဗေဒင်လိုင်းဘက်က လူသာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီနှစ်ယောက်ဇာတာနဲ့ အစ်ကို့ဇာတာကိုသာ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ချင်စမ်းပါဘိဗျာ။ နောက်တာနော်။ ဟဲဟဲ။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ထီတစ်မျိုးပဲလို့တော့ အဘ မင်းသိင်္ခက ဆိုဖူးတယ်။ သိန်းတစ်ထောင်တင်မက ၊ စကော့တလန်ထီပါပေါက်ပါစေဗျာ။
လုပ်မ နေနဲ့ဘယ်သူ မှ မယူနဲ့ ... ကျွန်တော့မှာ အဒေါ်ချောချောလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်ယူမလား လိပ်စာ ပေးမယ်...။
စတာ (မဟုတ်ဘူး-အတည်ပြောတာ.. ကျွန်တော့အဒေါ် လည်း အကို့ လို့ ဖြစ်ပြီး အပျိုကြီးဖြစ်သွားတာ)
အကို့ ငယ်သူငယ်ချင်း ကို အကျိုးအကြောင်းပြော ပြ သင့်တယ် လို့ မထင်ဘူးလား..။ အကို့ ရီးစား ကတော့ သွား မပြောနဲ့ ... အငယ် တွေ ကအားကြီး ပြောရခက်တာ..။ သူ့ မှာလည်း အကို့ လို့အဖြစ်မျိုး ရှိနေ ရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေ သွားတာပေ့ါ.. သူ့ မှာအဲ့လို မျိုး မရှိလည်း ... တကယ်လို့ သူ့ ကို ယူဖြစ် ခဲ့တယ်ဆိုရင် သူ အကြောင်းစုံသိထား ရတော့ လိပ် ပြာ သန့် တာပေ့ါ.. အကို့ ဘက်က..။ ဟုတ်ဘူးလား.။
ရီးစား ကောင်မလေး ကရော သေချာ ရဲ့လား... .။ သူ က ရော အကို နဲ့တစ် သက်စာ လက်တွဲ ဖို့ စိတ်ကူး ရှိ ရဲ့လား...။ သေချာမေးကြည့်ပါဦး...။
နောက်ဆုံးအစဉ်းမပြေ ရင်တော့ ကျွန်တော့ အဒေါ် သာယူလိုက်တော့ ဟိဟိ..။
အဲ့လို မျိုးတွေ ဝေ လွန်းလို့ သူလည်း အပျိုကြီးဖြစ်နေရှာတာ..။ အကိုလည်း ထို နည်းလည်ကောင်း ဖြစ်သွားမယ်နော်..။
ဖြစ်မှာပါ .. ..
a ko ka loke like pyan p ;P